तपाईलाई थाहा छ? पृथ्वीका सबै मानिसलाई माकुराले एक वर्षमै खाइदिन सक्छ ! – Ujyaalo Patrika
तपाईलाई थाहा छ? पृथ्वीका सबै मानिसलाई माकुराले एक वर्षमै खाइदिन सक्छ !
Previous अ,न्त्यष्टिका लागि चि,तामा सुताइएका मलिक आगो लगाउने बेलामा जुरुक्क उठेर बसेपछि…
Next अव ३ महिना तालिम लिएर मात्र बिहे गर्न पाइने : – नयाँ नियम !